Ngwa 3 a na-enye iji mee ka arụ ọrụ gị dị elu ma mee ememe Summer Solstice | Esi m mac
Ngwa 3 na-enye iji mee ka arụpụtaghị gị ma mee ememme Summer Solstice
Anyị ruru n’etiti izu ọrụ, na nke ugbu a ọ bụ ọpụrụiche pụrụ iche n’ihi na ọ bụ oge ọkọchị! Mba, arachabeghị m. N'agbanyeghi otu esi ekpo ọkụ ugbu a, taa bụ ụbọchị solstice, ụbọchị kachasị ogologo nke afọ, na dị ka nke ụtụtụ a na 6: 24am peninsular oge, anyị na-eze na ndaeyo.
The Summer Solstice bụ oge ememme na emume, na Esi m mac Anyị enweghị ike ịdị obere, yabụ anyị ga-eme ya dịka anyị maara nke ọma, na-atụ aro ngwa atọ iji nye gị nke ị nwere ike nweta ọtụtụ ihe na Mac gị ma rụpụtakwu ọrụ. N'ezie, ị kwesịrị ị na ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji uru nke ndị a ịrịba ego n'ihi na nkwalite ndị a ga-adị ire ruo etiti abalị.
1 Uzo mkpirisi - Nweta faịlụ na nchekwa ọsọ ọsọ
2 Oghere Oghere - Dọrọ na Drop Njikwa faili
Uzo mkpirisi - Nweta faịlụ na nchekwa ọsọ ọsọ
Ọ bụla Mac ọrụ maara, ka ukwuu ma ọ bụ karị, mkpa nke keyboard shortzọ mkpirisi na mkpirisi na-arụ ọrụ ngwa ngwa, mfe, rụọ ọrụ nke ọma na, n'ikpeazụ, na-arụpụta ihe karị. Ọfọn, Uzo mkpirisi bụ ngwa ga-aba oke uru n'ihi na na-enye gị ụzọ mkpirisi ugboro ugboro iji faịlụ, nchekwa, ngwa, na ibe edokọbara.
Ngwa ahụ Uzo mkpirisi Ọ dị na menu menu nke Mac gị, -enye gị ohere tinye na-akparaghị ókè shortzọ mkpirisi, nke ị nwere ike ịnweta ngwa ngwa na ngwa ngwa. Iji mee nke a, pịa pịa akara ngosi na menu mmanya ma họrọ ihe ịchọrọ ịnweta. Nke ahụ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị na-a lee anya na Mac App Store ị ga-ahụ na ya price bụ € 10,99, Otú ọ dị i nwere ike zụta ya ebe a maka ihe karịrị euro abụọ. Ma cheta na onyinye ahụ kwụsịrị n'abalị a.
Oghere Oghere - Dọrọ na Drop Njikwa faili
Oghere dobe bụ ihe ọzọ dị ukwuu Mac bara uru nke na-ewe ahụmahụ ịdọrọ na-dobe na ọkwa ọhụrụ nke arụpụta ihe. Oleekwa otú ọ ga-esi kwe omume? Mfe. Dị ka aha ya na-egosi, Oghere dobe na-esite oghere ebe echekwara faịlị gị mgbe ị na-agagharị na ebe ị chọrọ iwere ha. Nke a na - enye gị ohere ịhapụ oke ahụ n’etiti ịdọrọ na dobe arụmọrụ. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịnakọta ọtụtụ faịlụ site n'ọtụtụ ebe dị iche iche wee tụlee ha n'otu ebe ị chọrọ ha, dị ka folda ọzọ ma ọ bụ email.
Ọ bụrụ na ị na-a lee anya na Mac App Store ị ga-ahụ na ego nke Oghere dobe Ọ bụ .6,99 XNUMX ma i nwere ike zụta ya ebe a na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% ego. Ma m siri ọnwụ, mee ọsọ ọsọ n'ihi na nkwalite ahụ na-abịa na njedebe n'abalị a.
Anyi wee mechaa ngwa a na ere ka eme ya eme Solstice Ntuziaka, Ngwá ọrụ ọzọ ga - eme ka arụpụtaghị gị na Mac. Ì chetara post-ya? O doro anya na ha bụ n'ihi na ha ka nọ n'ọfịs. Ọfọn, Ntuziaka ọ na-enye gị ohere ngwa ngwa debe ozi di nkpa na ederede adhA ga-ahụ anya na ihuenyo Mac gị ka ị ghara ichefu. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ ụzọ na ntọala, nke mere na ihe edeturu gị mara mma.
Ntuziaka Ọ nwere a mgbe price nke € 7,99 ma ugbu a, i nwere ike nweta ya ebe a maka naanị euro ole na ole.
MARA EGO: Cheta na onyinye na nkwalite ndị anyị gosiri gị na ọkwa a ga-adị ire naanị maka obere oge, yabụ, anyị na-adụ gị ọdụ na, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ma ọ bụ nwee mmasị, budata ha ozugbo enwere ike ka ị nwee ike irite uru na ego. Ebe ọ bụ na Esi m mac Anyị nwere ike ịkwado ndaba nke onyinye ndị a n'oge a na-ebipụta post a. Ma Esi m mac Mụ onwe m enweghị ụdị mmekọrịta ọ bụla na ndị mmepe nke ngwa ndị a ma ọ bụ na mgbasa ozi "Tuesday abụọ Dollar" nke kwalitere nkwalite a, yabụ anyị amaghị banyere mgbanwe ndị enwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa 3 na-enye iji mee ka arụpụtaghị gị ma mee ememme Summer Solstice
A na-ere ahịa Apple 1 nke na-anaghị enweta atụmanya
Apple mgbe niile nwere ọnụ ụzọ ámá Mac maka ndị ọrụ na-eme mkpọtụ ahụ